မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပေးရန် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ – မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒနှင့်အညီ အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပေးရန် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်း ရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဧပြီ ၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) တွင် ကျင်းပသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးက သဘော ထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်း ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါသဘောထားထုတ် ပြန် ကြေညာချက်တွင် လွတ်လပ် သောအချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံတို့၏ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းမှာ ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒ သဘောထား များကို လေးစားလိုက်နာခြင်းဖြစ် ကာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက် သိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူတို့၏ လွတ်လပ်သောဆန္ဒသဘော ထားများကို လေးစားလက်ခံရန် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်း ရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား ဦးစွာအလေးအနက် တောင်းဆိုကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ အတွက် လွန်စွာအရေးပါသော မ ဟာဗျူဟာမြောက် အကျိုးစီးပွားများနှင့်ပတ်သက်နေသော ကိစ္စ ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာ ဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် မဟာဗျူဟာ ကျနစွာ ခန့်ခွဲစီမံနိုင်ရန်လွန်စွာအရေးကြီးပြီး အနာဂတ်လူမှုဘဝဖြစ် တည်မှုများကို ထိခိုက်နစ်နာမှုများ မဖြစ်ပေါ်ရလေအောင် အနာဂတ် လူသားအရင်းအမြစ်များ၏ အကျိုး စီးပွားများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက် ရန်မဖြစ်မနေ လိုအပ်ကြောင်းကို နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် နွယ်ယှက်ပတ် သက်နေသူများအားလုံးအား လေး နက်စွာသိစေအပ်ကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ပြီး စာရေးဆရာမဂျူးက ”ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းအမြင်ကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ဘယ်လိုမျိုးမှ မဆောက်စေချင်ပါဘူး။ အဲဒီနေရာ ဟာ ယဉ်ကျေးမှုနေရာ၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးနေရာ အစစအရာရာ အရေး ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက် မြစ်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲဒီနေရာကိုနည်းနည်းလေး မှ အထိမခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အစကတည်းက ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ နောက်လည်း ကန့်ကွက်နေဦးမှာဖြစ်ပါ တယ်”ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူပြည် သားတို့၏ အခွင့်အလမ်းများ၊ ရပိုင်ခွင့်၊ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုများ၊လုံခြုံမှုအစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်မှုရှိသော စာချုပ်စာတမ်းများကို နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ချုပ်ဆိုမှုပြုရာတွင် နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအား ထိပါးမှုမရှိစေရေးအတွက် အထူး ဂရုပြုဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အမိနိုင် ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှု ရေးကိစ္စရပ်များ အပေါ်အကျပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်ထားနိုင်သောစာချုပ်များ မချုပ်မိစေရန်အထူးဂရုပြု လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ၏သဘောတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာပါဝင်မှုမရှိဘဲ ယခင် အစိုးရလက်ထက်အမှားများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲလိုသောပြည်သူ၏ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ ဧရာဝတီ ၏ကံကြမ္မာနှင့် နိုင်ငံ၏ကံကြမ္မာတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေသောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအားလုံးနှင့် သက် ဆိုင်သော ဧရာဝတီ၏အရေး ကိစ္စကို တစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့ မဟုတ်)တစ်ဖွဲ့က မဆုံးဖြတ်သင့် ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက”မြစ် ဆုံကိုဘာစံနှုန်းနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့အသည်းနှလုံးဖြစ် တယ်။ မြစ်ဆုံကနေအခြေပြုလာတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးပိုင်တဲ့ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ဦးတစ် ယောက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဧရာဝတီ မြစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက် သွေးကြောဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးစီး ပွားရှိနေတဲ့ လူတစ်စုကတော့ သ ဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဦးမှာပဲ။ အန်တီတို့သည် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အကျိုးမရှိတာ သေချာနေတဲ့အတွက် အခုလို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား အပြီး တိုင်ဖျက်သိမ်းရေးကိုသာ ပြည်သူ လူထု၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပါရန် တောင်းဆိုတိုက်တွန်းကြောင်း၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ စီမံကိန်း အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့်တကွ လက်ရှိဖြတ်သန်း နေရသော ခရီးလမ်းသည်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြစ် ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်း ရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစည်းအ ဝေးက ကြေညာအပ်ကြောင်း ဖော် ပြပါရှိသည်။
ပြည်သူကိုပေးထားသည့်ကတိများတည်ရန်မှာ အစိုးရ၏တာဝန်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆို
ဧပြီ ၁ ရက် ထီဖွင့်ပွဲတွင် ရောင်းမကုန်သည့် ထီစာအုပ် ခြောက်သိန်းကျော်ကျန်ရှိသည့်အတွက် ဆုမဲမ??
ဖွားသေစာရင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို Digital Mobile နည်းပညာဖြင့်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်
သမီးလေး ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုင်လီဂျန်နာ